Nambaran’i Khodorkovsky ny Fisokafan’ny Tetikasa “Open Media” Ho Fanohanana Ireo Start-up Momba Ny Fanaovan-gazety Fanadihadiana · Global Voices teny Malagasy
Nambaran'i Khodorkovsky ny Fisokafan'ny Tetikasa “Open Media” Ho Fanohanana Ireo Start-up Momba Ny Fanaovan-gazety Fanadihadiana
Voadika ny 02 Oktobra 2016 9:43 GMT
Sary: Chatham House, Flikr. CC 2.0
Tamin'ny Alakamisy, nambaran'i Mikhail Khodorkovky, Rosiana mpanakarembe amin'ny solitany any an-tsesitany sady mpikatroka mpanohitra, ny fisokafan'ny “Open Media (Media Misokatra)”, tetikasa hanome fanohanana ara-bola sy ara-teknika—ho an'ny mpanao gazety sy ny mpikatroky ny fiarahamonim-pirenena miasa amin'ny tetikasa fanadihadiana—anisan'izany ny servisy momba ny lalàna, ny fitantanam-bola ary ny fampiroboroboana .
Araka ny notaterin'ny RBC, hanohana tetikasa dimy hatramin'ny fito ny Open Media, hanome famatsiam-bola 3 ka hatramin'ny 30 tapitrisa robla (manodidina ny 50.000 ka hatramin'ny 500.000 dolara) ho an'ny tetikasa tsirairay. Ankoatra ny fanekena ny fangatahana avy amin'ny mpanao gazety, dia liana amin'ny tolo-kevitra ara-tetikasa avy amin'ireo olona tsy manana traikefa mivantana amin'ireo sehatra ireo ihany koa ny vaomiera, anisan'izany ny mpikatroka sy ny olo-malaza, araka ny filazan'i Kulle Pispanen sekreteran-gazetin'i Khodorkovsky. Mety hoheverina ireo tetikasa miompana amin'ny fikarohana ara-toekarena, kolontsaina, ary ny fifandraisana eo amin'ny fihariana sy ny manam-pahefana. Hanana lehiben'ny tonian-dahatsoratra sy vondrona kelin'ny mpiasa ny tetikasa tsirairay. Nilaza i Khodorkovsky fa hamela ny olona mba “hanandrana hampihatra ny hevitr'izy ireo ny Open Media; raha tsy mahomby izany, dia tsy olana loatra, fa amin'ny fotoana manaraka indray. “.
Nilaza momba an'i Khodorkovsky tahaka izao ny RBC:
Singa manan-danja ho an'ny fiarahamonim-pirenena ny media ka tsy avelantsika ho simba izany … mila vondrona manatalenta tsy voantohintohin'ny fahazarana manaiky lembenan'ny manam-pahefana ny firenena.
Nogadraina tamin'ny taona 2003 noho ny fiampangana heverin'ny maro fa noho ny antony ara-politika i Khodorkovsky, Tale Jeneralin'ny Yukos teo aloha, izay orinasan'ny solika goavana indrindra ao Rosia. Hatramin'ny namoahana azy tany am-ponja tamin'ny 2013, nandray anjara tamin'ny tetikasa median'ny fiarahamonim-pirenena maro isan-karazany izy: nandany 250.000 dolara izy sy ilay mpandraharaha Boris Zimin hanampiana amin'ny fananganana ny Meduza, iray amin'ireo tranonkalam-baovao Rosiana tsy miankina malaza indrindra. Tamin'ny lohataona 2014, nanakarama ny filoha lefitry ny tonian-dahatsoratry ny Kommersant teo aloha izy mba hanangana ny “Open Russia,” tetikasan'ny fiarahamonim-pirenena natao “hamoriana ny olom-pirenena monina ao anatiny sy ivelan'i Rosia, izay miombon-kevitra amin'ny soatoavina Eoropeana momba ny firenena matanjaka, mavitrika, hita fa mandroso izay naorina tao anatin'ny andrim-panjakana demokratika mahomby sy tan-dalàna. “
Nilaza i Khodorkovsky fa na dia azo atao aza ny fananganana tranonkala misaratsaraka ho an'ny tetikasa Open Media tsirairay, dia mety hoe mandany fotoana loatra ny fanaovana izany amin'ny farany. Nilaza izy fa ny Open Rosia dia azo ampiasaina ho sehatra ho an'ireo tetikasa ireo, izay ho eo amin'ny dingana fanandramana mandra-panokafana azy amin'ny fomba ofisialy amin'ny Desambra. Na izany aza, hifantoka amin'ny media sosialy ny tetikasa, ka samy mitantana ny kaonty media sosialy manokan'izy ireo ny ekipa tsirairay ary mizara ny fanadihadian'izy ireo ao.
Voalaza fa mikasa hanatontosa tetikasa goavana sy misaratsaraka i Khodorkovsky, izay hanatontosa fikarohana ara-piarahamonina—angamba noho ny fahitana ny fampidirana vao haingana ny Foibe Levada, orinasan'i Rosia mahaleotena mitaridalana eo amin'ny sehatry ny fitsapan-kevitra, ho “mpitsikilo vahiny” ao amin'ny lisitr'i Kremlin.”